Kofehy farafaharatsiny sy loko manga
Hobbies & Activities Lesona sy lesona
Ny loko teraka dia loko afovoany izay vita amin'ny fampifangaroana loko mitovy amin'ny loko voaloko miaraka amin'ny loko faharoa mifanaraka aminy eo amin'ny kodiarana loko.
Misy loko telo lehibe - mena, mavo ary manga; loko hafa faharoa (natao tamin'ny fampifangaroana ny fiarahamonina roa miaraka amin'ny fitoviana mitovy) - maitso, volomparasy ary volomparasy; Ary loko enina enina - mena-jiro, mavo-oranjaho, mena-volomparasy, manga-volomparasy, mavo ary maitso mavo.
Fomba nentim-paharazana ny anaran'ny loko iray manomboka amin'ny loko voalohan'ny voalohany sy ny loko faharoa manaraka, misaraka amin'ny biriky.
Ny loko teritery dia ny dingana eo amin'ny loko fototra sy faharoa amin'ny 12 kilasy loko. Ny kodiarana ny loko 12-part dia misy ny loha-hevitra, ny faharoa, ary ny loha-tertiary toy ny amin'ny sary aseho, miaraka amin'ny # 1 maneho ny loko fototra, # 2 misolo tena ny loko faharoa, ary ny # 3 misolo tena ny loko. Ny loko misy loko 6-part dia ahitana loko voalohany sy faharoa, ary ny kodiarana ny loko 3 isaky ny loko fototra.
"Amin'ny fanitsiana ny ohatr'ireo loko fototra sy ambaratonga faharoa, dia afaka mamorona karazana loko marobe ianao. Ny loko hafa dia azo atao amin'ny alàlan'ny famerenana imbetsaka ny mpivady mpifanolo-bodirindrina mandra-pahatongan'ny fifandimbiasana loko mitohy. "(1)
Ampiasaro ireo tetik'ady hanampy anao hamolavolana loko
Ny kodiaran'ny loko voalohany dia noforonin'i Sir Isaac Newton tamin'ny 1704 taorian'ny nahitan'izy ireo ny tara-pahazavana hita maso tamin'ny hazavana fotsy nandritra ny fisian'ny prisma.
Nahita ny endriky ny mena, manga, mavo, maitso, manga, indigo, ary violet (fantatra amin'ny anarana hoe ny anarana hoe ROY-G-BIV), dia nanapa-kevitra i Newton fa ny mena, mavo, ary manga dia ny loko rehetra ary namorona ny kodiaran'ny loko tamin'izany fomba izany, ka namadika ny lamin'ny loko niverina teo amin'ny tenany mba hamoronana ny faribolana ary hampiseho ny fivoarana voajanahary ny loko.
Tamin'ny taona 1876, Louis Prang dia nanandrana teorinan'ny loko fotsy, namorona ny kodiarana loko izay fantatsika indrindra amin'izao andro izao, dikan-teny tsotra iray amin'ny tononkiram-pahadiovana (tsy misy tononkira, tonony na fintana ), hanazavana ny tefitry ny lokony sy mba hanompo fitaovana ho an'ny mpanakanto mba hahatakatra ny fomba hanatsarana kokoa ny loko ary hamorona ny loko tiany.
Fantatr'izy ireo fa samy mifandray amin'ny loko samy hafa ny loko: samy mifanohitra na mifanaraka. Ny kodiarana miloko dia manampy antsika hamantatra ny endriky ny loko mifamatotra amin'ny toerany eo amin'ny kodiarana loko mifanaraka amin'ny tsirairay. Ireo loko izay mifanakaiky kokoa dia mifanaraka kokoa sy mifanaraka tsara kokoa, mamokatra loko misimisy kokoa rehefa miara-mifangaro, fa ireo izay mifanaraka kokoa dia mifanohitra kokoa, mamokatra loko miavaka na tsy misy fanasitranana rehefa mifangaro miaraka.
Ny loko mifanakaiky amin'ny iray dia antsoina hoe loko aforitra ary mifanaraka tsara. Ireo mifanohitra amin'izany dia antsoina hoe loko fanampiny . Ireo loko ireo rehefa mifangaro dia miteraka loko matevina, ary iray fanampiny dia azo ampiasaina mba hanampiana ny tsy handrodana na hanasivana ny hafa.
Azonao atao, ohatra, ny lokony, miaraka amin'ny lokon'ny loko sy ny mena, ny lokony, ny lokony na ny lokon'ny loko sy ny manga, maitso.
Mba hampihenana ny mavo-jiro dia ampiasainao amin'ny manga-volomparasy mifanohitra aminy izany. Mba hampihenana ny mavo mena dia alamino miaraka amin'ny volony miloko volomparasy.
Raha miezaka mamolavolaina maitso maitso ianao dia hampiasa jiro mangatsiaka, toy ny hazavana mavomando hansa sy manga mafana toy ny manga mavo satria mifanakaiky kokoa izy ireo eo amin'ny kodiarana miloko. Tsy te-hampiasa loko mavomavo mavomavo ianao, toy ny manga-manga azo ary ny manga ultramarin satria izy ireo dia misaraka amin'ny loko-loko. Ireo loko ireo dia misy mena kely mifangaro miaraka amin'izy ireo, ka mampifangaro ny loko fototra telo ao anaty fitambaran-javatra iray, ka mahatonga ny loko farany ho somary mavo-na maitso-neutral-maitso.
Vakio ny loko marevaka sy ny loko mifangaro mba hahafantarana ny fomba handoko ny loko volon-koditra manokana amin'ny alalan'ny loko mafana sy mafana amin'ny lokon'ny loko tsirairay mba hamoronana loko isan-karazany amin'ny loko hafa.
Tsarovy fa manakaiky kokoa ny loko samihafa eo amin'ny kodiarana miloko, ny mifanaraka kokoa amin'izy ireo, ary ny mavesa-danja kokoa ny loko vokarina dia rehefa mifangaro ny lokony.
Famaritana ny tetiarana mifototra amin'ny fitsangatsanganana Goethe (fampiasana kely)
Tamin'ny 1810, Johan Wolfgang Goethe dia nanohitra ny fihevitr'i Newton momba ny fifandraisana amin'ny loko sy ny loko ary namoaka ny Theorie momba ny Colère mifototra amin'ny vokatra ara-psikolojika hita taratra. Ao amin'ny Triangle Goethe, ireo lohalaharana telo - mena, mavo ary manga - dia eo amin'ny tendron'ny triangatra ary ny loko faharoa dia eo anelanelan'ny sisin'ny telozoro. Ny zavatra hafa dia ny hoe ny tertiary dia ny triangolo miloko tsy misy fehezanteny noforonina tamin'ny fampifangaroana loko voaloko amin'ny loko faharoa mifanohitra aminy fa tsy mifanaraka amin'izany. Satria io dia mampiavaka ny loko rehetra, ny vokatra dia fiovaovana mena, ary tsy mitovy amin'ny famaritana matetika ny loko iray tertiary, izay mahasoa kokoa ny mpahaikatra. Ny tetibolan'i Goethe kosa, fa ny mpikaroka dia fantatra matetika amin'ny loko tsy mitongilana .
> 1. Jennings, Simon, Ny Boky Torolalana Mahagaga, Ny Tari-dalan'ny Famolavolana sy ny Loko , p. 214, Boky Chronicle, San Francisco, 2014.
Torohevitra mahasoa ho an'ny sary hosodoko
Dingana miteniteny: Sary hosodoko amin'ny rano
Self Portrait: Dingana iray isan-dingana Demo
Ny fomba famafazana fanadihadiana amin'ny sary
Ahoana ny fomba fampiasana horonam-peo eo amin'ny sary hosodoko
Ahoana no hikolokolo ny rano amin'ny rano, amin'ny fampiasana lamba felana rano
Dingana miteniteny: Sary hosodoko
Fihetsiketseham-panoherana Shinoa malaza
Ahoana ny fomba fanaovana printy monotype
Ahoana no nanoloran'ny Shoanita ny Impressionista?
Ny Tempoly Manga: Inona no Miboiboitra Tsara sa Tsia?
Mentos sy Soda Project
Andinin-tsoratra masina momba ny fitiavana tsy misy fepetra
Ady tamin'ny ady an-trano amerikana: ady voalohany tamin'ny Bull Run
'Taratasy ho an'ny Star Wars Rebels'
Ny Tantaram-piainana dia mitahiry Candy
Famaritana ny olana amin'ny teny anglisy
Tantaran'ny fiara fitondra-tena
Open-Heeled vs vinaingitra tanteraka
Rakitsary ho an'ny mpandresy ela indrindra amin'ny LPGA Tour
Ahoana ny fomba hamelomana indray ny Batemy maty
Ny biography of Giacomo da Vignola
Ny Tobin'i Death Sobibor
Inona no atao hoe Fasade?
Mampianatra lesona mamy ho an'ny zaza amam-behivavy
Fanitsiana tsoratadidy: Teny Double-Teny - Tenim-pirenena - Eszett
The Skateboards Best Starter Kit
Famaritana momba ny asa soratra sy ohatra
Mahatsiaro rap: The Sharpest Double-edged sword in Hip-Hop
Ny niandohana sy ny tantaran'ny tennis
Biographie an'i Elena Kagan
Firaisana ara-nofo ao amin'ny Kolontsaina Shinoa Traditionnel
20 Tattoos mahatsikaiky mahatsikaiky: azonao atao ve ny manala baraka?